Seven Benefits of Using Game in Your Marketing Strategy
home about services portfolios pwalkyam blog contact
Game ဆော့ရတာကို သဘောကျလား ? Game တွေကိုကော ဆော့နေလား ? ဒါဆိုရင် ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ Business လုပ်ငန်းအတွက် Marketing Strategy မှာ Game ကို အသုံးချဖို့ကော တွေးမိလား ? မတွေးမိဘူးဆိုရင် အခုတွေးဖို့ အချိန်ကောင်းပါပဲ။ သင်တစ်ယောက်တည်းမကပါဘူး။ လူတိုင်းက ဂိမ်းဆော့ရတာကို ကြိုက်တယ်။ သဘောကျကြတယ်။ အထူးသဖြင့် mobile phone တွေပေါ်မှာပေါ့။
အခုနောက်ပိုင်းမှာ Mobile Phone တွေဟာ Social Media တွေ Web တွေအပေါ်ကနေ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ ဖောက်သည်တွေကြား engage ရဖို့ အသုံးဝင်တဲ့ Channel တစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဖုန်းကိုအသုံးပြုတဲ့ 32% သော ရည်ရွယ်ချက်က ဂိမ်းဆော့ဖို့ အတွက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ ။ ဖုန်းသုံးသူတွေရဲ့ ၁၈%ဟာ Game ကို Facebook ပေါ်မှာ ဆော့တာဖြစ်ပြီး ၆% ကတော့ တခြား Social Media တွေ အပေါ်မှာ ဆော့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့သူတွေကတော့ Mobile Phone တွေအပေါ်မှာ ဆော့တာဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လို့ သင့်အနေနဲ့ ပေးချင်တဲ့ Message ကို Game နဲ့ Social နဲ့ ပေါင်းပြီး ပေးနိုင်ခဲ့ရင် အောင်မြင်နိုင်ဖို့ ရာခိုင်နှုန်းများပါတယ်။ ဂိမ်းကို အသုံးချပြီးတော့ သင့်အနေနဲ့ Customers တွေကို ပျော်ရွှင်အောင် ၊ စိတ်လှုပ်ရှားအောင်လုပ်နိုင်ပြီး ကိုယ့် Brand နဲ့လည်း ထိတွေ့အောင် ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
အောက်မှာတော့ သင့်ရဲ့ Marketing Strategies မှာ Game ကို အသုံးချရင် ရနိုင်တဲ့ Benefits ၇ ချက်ကို ပြောပြထားပါတယ်။
၁) High Engagement
တခြား Content တွေထက်စာရင် ဂိမ်းဟာ 86% ကနေ 90% ထိ Engagement Rate ပိုများပါတယ်။ Game ကိုဆော့ခိုင်းတာနဲ့တင် Company အနေနဲ့ Brand ကိုကော Product ကိုကော ကြေငြာပေးရာ ရောက်ပါတယ်။
၂) Permission Based
Marketing ဟာ အခုဆို Outbound ကနေ Inbound အဖြစ်ကို ရွေ့လျားလာပါပြီ။ ဒါကြောင့်လည်း Marketer တွေဟာ Inbound Marketing Content တွေမှာ အချိန်ကုန်ခံပြီး Leads တွေကို ရအောင် ကြိုးစားလာကြပါတယ်။ Game ထဲမှာလည်း အဲဒီအချက်ကို ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ Game Leaderboard မှာ ကိုယ့်နာမည်ပေါ်ဖို့ ( ကိုယ့် Contact ထဲက သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတွေနဲ့ ပြိုင်ဆိုင်ဖို့ ) ကိုယ့်ရဲ့ Contact Details တွေကို Permission ခွင့်ပြုတာမျိုး က သက်သေပါပဲ။
၃) Social Media Friendly
နောက်ပိုင်းမှာ Online Game တွေဟာ Social Media Network တွေမှာ Share လို့ ရလာပါပြီ။ ဒါက အရမ်းအရေးကြီးတဲ့ အချက်ပါ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ လူတွေအတော်များများက Social Media ကို mobile phone တွေကနေ သုံးစွဲနေကြလို့ပါ။ ဒါကြောင့် Game တွေကို Online မှာ Share ခြင်းအားဖြင့် ခင်ဗျားရဲ့ Marketing Message ကို ခင်ဗျားပေးချင်တဲ့ Audience တွေအပြင် သူတို့ရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကိုပါ မြင်အောင် ပြပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၄) High Conversion Rates
Games တွေဟာ Marketing Content ထဲမှာ Unique အဖြစ်ဆုံး အပိုင်းတစ်ခုလို့လည်း ပြောလို့ရပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ လူတော်တော်များများက Game ကို Marketing လို့ မသတ်မှတ်လို့ပါ။ ဒါပေမဲ့ ခင်ဗျားရဲ့ဂိမ်းဟာ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းပြီး ပြိုင်ဆိုင်မှု ရှိရပါမယ်။ ဒါမှသာ Customers တွေဟာ အပြိုင်အဆိုင် Score ကိုတင်ဖို့ ဆော့ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထွက်လာတဲ့ Leaderboards ကနေလည်း Customers တွေကို ပိုပြီး ပြိုင်ဆိုင်မှု ပြင်းထန်လာအောင် လှုံ့ဆော်နိုင်ပြီးတော့ Conversion Rates တွေ တက်လာအောင် ဖန်တီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဂိမ်းတွေက ပျော်ရွှင်ဖို့ ကောင်းပါတယ်။ ဂိမ်းဟာ ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ အလုပ်မဟုတ်သလို ၊ Marketing လည်း မဟုတ်ပါဆိုတဲ့ ခံစားချက်မျိုးကို ပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ လွတ်နေတဲ့အချိန်တွေမှာ ဂိမ်းဆော့ရင်း ကျော်ဖြတ်ဖို့ အကောင်းဆုံးပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ ပြောချင်တဲ့ Marketing Message ကို Game Format ထဲထည့်ပြီးကြော်ငြာခြင်းဖြင့် သင့်ရဲ့ Product အပေါ် ရှိလာမဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကိုလည်း လှုံ့ဆော်နိုင်ပါတယ်။
နောက်ပိုင်း Online Game တွေဟာ Platform ပေါင်းစုံမှာ ကစားလို့ ရလာပါပြီ။ Desktop , Mobile , Tablet စတာတွေပေါ်မှာတင်မက ဘယ်နေရာကမဆို ဒေါင်းလုတ်ပြန်လုပ်စရာမလိုဘဲ ဆော့လာနိုင်တာက အားသာချက်ပါပဲ။
အရင်အချိန်တွေတုန်းကတော့ ဂိမ်းတစ်ခုဖန်တီးဖို့ဆိုတာ အချိန်တင်မက ငွေရေးကြေးရေးအရကော အကုန်အကျ အရမ်းများခဲ့တဲ့အရာပါ။ အခုအချိန်မှာတော့ HTML5 Game တွေကို စျေးသက်သက်သာသာ Template တွေသုံးစွဲပြီး အချိန်သိပ်မကုန်ဘဲ ရေးဆွဲနိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကုန်ကျစရိတ်ဆိုတာကလည်း နာမည်ကြီး Brand တွေအတွက် သူတို့ Marketing Budget နဲ့ ယှဉ်ရင် ပြောပမလောက်တဲ့ အနေအထားမျိုး ဖြစ်လာပါပြီ။
Customers တွေဟာ Mobile ဖုန်းတွေသုံးပြီး Brand တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်လာမှုတွေ များပြားလာတာနဲ့အမျှ Game တွေကို Marketing တွေနဲ့ တွဲစပ်အသုံးချလာမဲ့ Brand တွေဟာလည်း တဖြည်းဖြည်း များပြားလာပါပြီ။ တကယ်လို့ လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက် လိုအပ်တဲ့ Website ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ mobile app ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Game တွေဖန်တီးပြီး Marketing မှာ အသုံးချချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် Venus Lab ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ Venus Lab က လူကြီးမင်းတို့ လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ အဆင်သင့်ရှိနေပါတယ်။
#idea_to_impact #venuslab #website #mobile_app
Business Website ရှိခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများ
Facebook Page တစ်ခုရှိရုံနဲ့ လုံလောက်ပြီလား???
Game တစ်ခုကို ပြီးဆုံးအောင် ရေးဖို့
သင့်လုပ်ငန်းကို Digital Transform လုပ်ခြင်းဖြင့် မြှင့်တင်လိုက်ပါ။
နည်းပညာကြောင့် အစားထိုးခံလာနိုင်ရသော ပစ္စည်းများ